ရုရှားနိုင်ငံရှိသဲကန္တာရဇုန်ဘယ်မှာလဲ? Archedinsko-Don သဲများသည် Volgograd ဒေသ၏ Serafimovichsky နှင့် Frolovsky ခရိုင်များပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ Achredinsko-Don သဲများ၏200ရိယာ XNUMX ဟက်တာခန့်သည်။ Tsimlyansk သဲများ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ဒေသများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားရသနည်း။ သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘာအစီအမံ? လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကအမေရိက၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလန်ကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအင်အားတောင့်တင်းလာသောအခါ ...
ဘယ်ရုရှားမြို့မှာဆောင်းတွင်းမရှိလဲ။ ရုရှားတွင်ပူနွေးသောရာသီဥတုရှိသောဒေသသည် Krasnodar နယ်မြေ၏တောင်ဘက်၊ အထူးသဖြင့် Sochi ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန်မှာ ၁၄.၂ C ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန် ...
အင်္ဂလန်မှာရာသီဥတုကဘာလဲ စိုစွတ်သောအအေးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာ၊ ရာသီဥတုသည်အဓိကအားဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ရေစီးကြောင်း၏နွေးထွေးသောသမုဒ္ဒရာ၏စီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အအေးဆုံးလသည်ဇန်နဝါရီဖြစ်သည် (+3 C မှ…)
အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာရာသီဥတုကဘာလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်အချိန်သွားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲ။ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အထိအီဂျစ်၌အနားယူပါ။ စျေးနှုန်းကအရမ်းနိမ့်တယ်၊ ဟိုတယ်တွေ ...
ကျေးဇူးပြု၍ Australiaစတြေးလျ၏ကယ်ဆယ်ရေးကိုဖော်ပြရန်ကူညီပေးပါအစီအစဉ်သြစတြေးလျသည်inရိယာတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် သဘာဝတရား၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသဲကန္တာရများကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်သည်သဘာဝသယံဇာတများပေါကြွယ်ဝသည်။
ဝက်ခြံအစက်အပြောက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ badyagi နှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ ... ငါ့မိတ်ဆွေကသူတို့ကိုအလွန်ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာသူတို့အများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ပြbadagနာဟာအလှကုန်ပစ္စည်းရှိရင် "Tales with recipes" ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ အဲဒါကကူညီလိမ့်မယ်။
မော်စကိုနှင့်ဗော့ကူတာအကြားနာရီမည်မျှကွာခြားသနည်း။ Vorkuta တွင်သူတို့သည်မော်စကိုအချိန်အတိုင်းနေထိုင်ကြသည်။ ဤမြို့များကိုအချိန်ဇုန် (၃) ခုဖြင့်ခွဲထားသည်။ မော်စကိုတွင် (၁၂.၀၀) လျှင်၊ ဗော့ကူတာတွင် (၁၅.၀၀) ဖြစ်သည်။ အချိန်…
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတာကိုငါနားမလည်ဘူး ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်တယ် - မရှင်းဘူး။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတာကိုငါနားမလည်ဘူး ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်တယ် - မရှင်းဘူး။ ဘာကြောင့် Wikipedia ကိုကူးယူနေတာလဲ။ ထိုလူကမိုးရေကိုတိတိကျကျရေးသည်မဟုတ်ကြောင်း ...
Kustanai ဒေသရှိ tabol V K azakhstan မြစ်၏ရင်းမြစ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ မြစ်၏အကြီးမားဆုံးသောမြစ်လက်တက်များမှာ Uy, Iset, Tura, Tavda, Ubagan ဖြစ်သည်။ TOBOL မြစ်၏ရင်းမြစ်သည်တောင်ပိုင်းဥရလ၏အရှေ့ဘက်စွယ်၏နယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်။
ပဲရစ်, ပြင်သစ် အခု 16:13 ဒါပေမဲ့သူတို့မတူညီတဲ့အချိန်တွေမှာပြန်ဖြေကြတယ်။ ရီစရာ မော်စကိုတွင် ၂ နာရီလျော့နည်း http://www.timeanddate.com/worldclock/full.html http://logic-bratsk.ru/term/pogoda.php?key=p2 အချိန်အတိအကျယခုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် ...
ငါတို့အခုနေနေတဲ့ဘယ်ပြက္ခဒိန်ကိုမင်းသိသလဲ။ ဘယ်ပြက္ခဒိန်တွေကိုသင်သိသေးသေးလဲ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန် (ပုံစံအသစ်) အရအသက်ရှင်သည်၊ တော်လှန်ရေးမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ဂရီဂိုရီယန် (ဟောင်းစတိုင်) အရအသက်ရှင်ခဲ့သည် ...
လရဲ့ amplitude ကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲ။ ဤနေရာတွင်အရာအားလုံးသည်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သည်။ သင်နေ့စဉ်အပူချိန်လွှဲခွင်ကိုသင်တွက်ချက်နိုင်သည်။ လိုအပ်သောတိုင်းတာယူပါ။ မိုးလေဝသဌာနများသည်တစ်နေ့လျှင် ၈ ကြိမ်အပြင်ဘက်လေထုအပူချိန်ကိုတိုင်းတာသည်။
တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းရှိအပူချိန်မှာပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၄၅ မှ ၆၀ ဒီဂရီ၊ တောင်ဘက်တွင် ၆၀ မှ ၈၀ ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ငါတောင်ဝင်ရိုးစွန်းပတ်လည်အပူချိန်အတိအကျသိသည် ...
ဝင်ရိုးစွန်းညဆိုတာဘာလဲ ဝင်ရိုးစွန်းနေ့က? အဖြူရောင်ညများ? သူတို့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ရုရှား၌ဤအမှုအလုံးစုံတို့သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ဂူဂဲလ်က "ဝင်ရိုးစွန်းနေ့", "ဝင်ရိုးစွန်းညဥ့်", "အဖြူရောင်ည" ...
လူများကကျွန်ုပ်အားပထဝီဝင်ဇယားကွက်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်သင်က shit နှင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ခေါင်းကို shit ပေးရသည်။ ရာသီဥတု, အပူချိန်စသည်တို့ ... ?
အပူပိုင်းနှင့်အပူပိုင်းရာသီဥတုဇုန်များကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်အေးမြပါစေ။ + Subtropics - ကမ္ဘာမြေ၏ရာသီဥတုဇုန်။ အပူပိုင်းဒေသသည်အပူပိုင်းဒေသများအလယ်တွင်အီကွေတာနှင့်အလယ်လတ္တီတွဒ်အကြားတည်ရှိသည်။
အာဖရိက၌ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီအပူချိန်ပျမ်းမျှအာဖရိကသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပူဆုံးတိုက်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အပူပိုင်းဒေသနှင့်အီကွေတာလတ္တီတွဒ်များတွင်တည်ရှိသောကြောင့်သိပ္ပံနည်းကျနေရောင်ခြည်ပမာဏ (မြောက်ပိုင်းတွင်) ကိုရရှိသည်။
တိုက်တဲန်းနစ်ဘယ်မှာနစ်မြုပ်ခဲ့တာလဲ ၁၉၁၂၊ 4ပြီ ၄ ရက်၊ နယူးဖောင်လန်ကျွန်း၏အရှေ့တောင်ဘက်မိုင်သုံးရာမြောက်ပိုင်းအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်သန်းခေါင်ယံခန့်တွင်ပင်လယ်ရေအောက်အကြီးမားဆုံးပင်လယ်ကပ်ဘေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းရာသီ၌ Krasnodar အတွက်ရာသီဥတုကဘာလဲ ??? ဘယ်လိုအချက်အလက်မျိုးလဲ။ ဒါတောင်စိတ်မချရဘူးလား။ ယောက်ျားတွေ၊ မင်း Krasnodar ကိုရောက်ဖူးသလား အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ငါတို့သည် -8 -10 ရှိသည် ??? ဘယ်တုန်းကလဲ? ဒီဂရီအများကြီးနိမ့်သည်! ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,536 စက္ကန့်ကျော် Generate ။